Al-shabaab oo sheegay in ay dilayaan sarkaalkii Faransiiska ahaa ee ay haysteen . – Radio Daljir
Al-shabaab oo sheegay in ay dilayaan sarkaalkii Faransiiska ahaa ee ay haysteen .
Janaayo 17, 2013 6:33 b 0
Buulamareer, Jan 16 ? Ururka Al-shabaab ayaa sheegay inay dili doonaan sarkaal sare oo u dhashay waddanka Faransiiska, kana tirsanaa ciidamada sirdoonka ee Faransiiska, kaasoo muddo ka badan saddex sannadood gacantooda ku jiray.
War qoraaalka ah oo? uu soo saaray ururka Al-shabaab maanta oo (Arbaco ah), laguna baahiyey bar internet oo ay leeyihiin ayaa lagu caddeeyey in ay go?aansadeen khaarajinta sarkaalka Faransiiska ah oo lagu magacaabo Denis Allex’s.
Bayaanka Al-shabaab soo saaray, laguma muujin xilliga dilka ninkaasi la fulin doono, hase ahaatee qoraalkooda waxay tilmaameen qaadista tallaabadaani in ay tahay go?aan tashi iyo ka baaraandeg ku soo baxay, ayna tahay qaddiyad urur ahaan ka soo dhammaatay fulinteedu.
Isla warkaaasi, waxaa lagu faahfaahiyey dhacdadii weerar ee Buulamareer, iyagoo sheegay in dagaalkaasi uu socday muddo saddex saacadood ah, ugu dambayntiina ciidanka Al-shabaab ay khasab uga dhigeen kuwii Faransiiska in ay dib uga gurtaan goobta dirirtu ka dhacday.
Labo maalmood ka hor ururka Al-shabaab, waxaa uu shaaciyey meydka nin caddaan ah oo labbisan dharka ciidamada, kaasoo ay sheegeen in uu ahaa sarkaalkii hoggaaminayey weerarkii fashilmay ee Faransiisku ku qaaday deegaanka Buulamareer oo lagu haystay sarkaalka sirdoonkooda ka tirsanaa, iyagoo intaas ku daray in uu u dhintay dhaawacyo soo gaaray intii dagaalku socday.
Bilawgii todobaadkaan ayey ahayd markii Kamaandawsta Faransiiska oo ay kor ka waardiyeynayaan diyaarado dagaal oo ay lahaayeen labada dawladood ee Faransiiska iyo Maraykanku ay weerarka ku ekeen, dhisme lagu tuhunsanaa in lagu hayo Denis, weerarkaasi oo noqday mid guul-darraystay.
Sirdoonahaaan Faransiiska ah Denis Allex’s, sannaddii 2009-kii ayaa laga afduubtay magaalada Muqdisho isaga iyo nin kale oo ay saaxiibbo ahaayeen, kaasoo markii dambe ka baxsaday Al-shabaab, waxaana ay ninkaan gacanta ku hayeen muddo ka badan saddex sano.
Maamulka kumeel gaarkaa ee Kismaayo oo ka warbixiyay hay’ado samafal oo Kismaayo tagay.